एडीएचडी औषधि र बच्चाहरू - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा मनोरञ्जन खेलहरु कम्पनी, समाचार समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी, समाचार समाचार समुदाय, कम्पनी प्रेस भारी खेल कल्याण कम्पनी चेकआउट
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> एडीएचडी औषधि र बच्चाहरू
एडीएचडी औषधि र बच्चाहरू
ध्यान घाटा hyperactivity डिसअर्डर (ADHD) एक न्यूरोडेवलपमेन्टल अवस्था हो जुन प्राय बचपनमा निदान गरिन्छ। एडीएचडी को लक्षणहरु मा ध्यान नदिई, आवेग, र hyperactivity शामिल हुन सक्छ। बच्चाहरूमा एडीएचडी निदानको लागि कुनै खास परीक्षण छैन - चिकित्सा पेशेवरले निदान गर्नु अघि शैक्षिक प्रदर्शन, पारिवारिक अवस्था, र सामान्य व्यवहार वा बानीहरू जस्ता विभिन्न कारकहरू विचार गर्न सक्दछ।
कसरी तपाइँको बच्चालाई एडीएचडी छ मद्दत गर्ने
एडीएचडी लक्षण भएका बच्चालाई सहयोग पुर्‍याउन सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चिकित्सा पेशेवरहरूको सहयोग लिनु हो। हार्वर्ड मेडिकल स्कूलका अनुसार, महत्त्वपूर्ण व्यवहार समस्या सहित एक तिहाइदेखि आधा बच्चाहरू कुनै उपचार प्राप्त गर्दैनन् ।
एडीएचडीको लागि उपचार विकल्पहरूमा मुख्य रूपमा व्यवहार उपचार र औषधि समावेश गर्दछ। यद्यपि थप अनुसन्धान आवश्यक छ, आहार र खाना पूरकले पनि ADHD लक्षणहरू कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यो गाईडले एडीएचडीका साथ बच्चाहरूको लागि औषधिमा केन्द्रित हुनेछ।
के मैले मेरो बच्चालाई एडीएचडीको लागि औषधी दिनु पर्छ?
बच्चाहरूमा एडीएचडीको उपचार गर्नको लागि कुनै कुकी-कटर दृष्टिकोण छैन। तपाईं र तपाईंको डाक्टर बीच, तपाईं योजना मा सहमत हुनुपर्छ कि तपाईंको बच्चा राम्रो सेवा गर्दछ, र राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न यसलाई समायोजित गर्न को लागी तयार हुनुपर्दछ।
बच्चाहरूको लागि एडीएचडी औषधिको प्रकारहरू
एम्फेटामाइन्स र मेथिलफेनिडेट एडीएचडीका बच्चाहरूका लागि सिफारिश गरिएको सबैभन्दा सामान्य प्रकारका औषधीहरू हुन्। दुबै उत्तेजक औषधि मानिन्छ। एम्फेटामाइन्स र मेथिलफेनिडेटले मस्तिष्क, डोपामाइन र नोरपिनेफ्रिनमा केमिकलहरू नियमित गर्न मद्दत गर्दछ, संज्ञानात्मक नियन्त्रण बढाउन र ध्यान, सतर्कता, र ध्यान सुधार गर्न।
एडीएचडी औषधिहरूको प्रकार बीच एउटा भिन्नता तिनीहरूले लक्षणहरू कम गर्न कति चाँडो काम गर्दछन्।
छोटो-अभिनय उत्तेजकहरू लक्षण देखा परेको रूपमा लिईन्छ, र as० मिनेट भन्दा कममा काम गर्न सुरु गर्न सक्दछ। प्रभाव छ घण्टा सम्म महसुस गर्न सकिन्छ।
लामो-अभिनय उत्तेजक समय रिलीज औषधि हुन्, कहिलेकाँही छालामा लगाइएको प्याच मार्फत वितरित। तिनीहरू पनि गोली, द्रुत विघटन ट्याब्लेट, चेवाबल, र तरल रूपहरूमा आउँदछन्। लामो-अभिनय उत्तेजकहरू औसतमा to देखि १२ घण्टासम्म काम गर्न सक्छन् सूत्रीकरणमा निर्भर गर्दै।
छोटो अभिनय एम्फेटामाइन उत्तेजकहरू
Adderall (एम्फेटामाइन / dextroamphetamine)
Dexedrine, Dextrostat (dextroamphetamine sulfate)
लामो-अभिनय एम्फेटामाइन उत्तेजकहरू
Adderall XR (एम्फेटामाइन / डेक्स्ट्रोमफेटाइन)
डेक्सेड्रिन स्पानसुलहरू (डेक्स्ट्रोमफेटामिन सल्फेट)
छोटो अभिनय मेथिलफेनिडेट उत्तेजकहरू
मध्यम अभिनय मेथिलफेनिडेट उत्तेजकहरू
मेटाडेट सीडी (मेथिलफिनिडेट विस्तारित रिलीज)
मेथाइलिन ईआर (मेथिलफिनिडेट निरन्तर जारी)
Ritalin LA (methylphenidate विस्तारित रिलीज)
लामो-अभिनय मेथिलफेनिडेट उत्तेजकहरू
Quillivant XR (मेथिलफेनिडेट)
Qelbree (viloxazine विस्तारित रिलीज क्याप्सूल)
मेरो बच्चाको लागि कुन एडीएचडी औषधि उत्तम छ?
तपाईंको बच्चाको लागि उत्तम हुने एडीएचडी औषधि त्यो हुनेछ जुन तपाईं र तपाईंको डाक्टरले छलफल गर्नुभयो र तपाईंको बच्चाको समग्र उपचार योजनाको हिस्साको रूपमा सहमत हुनुहुनेछ, जसमा संज्ञानात्मक व्यवहार उपचार, स्कूल बस्ने ठाउँ, र आहार परिवर्तनहरू पनि समावेश हुन सक्दछन्।
समग्रमा, लामो-अभिनय एडीएचडी औषधिहरू बच्चाहरूको लागि सबैभन्दा सामान्य रूपमा निर्धारित उपचार हो। लामो-अभिनय औषधी १ 17 बर्ष र कम उमेरका बच्चाहरूको लागि criptionscriptions% नुसारको लागि खाता ।
पूरा दिन काम गर्ने औषधी धेरै कारणका लागि बच्चाहरूको लागि उत्तम विकल्प हुन सक्छ।
औषधी एक पटक मात्र लिन्छ, सामान्यतया दिनको सुरूमा, जब हेरचाहकर्ताले बच्चाको सुपरिवेक्षण गर्न सक्दछन् ताकि औषधीलाई चाहेको रूपमा लिईन्छ।
किनकि उनीहरूले एक मात्र डोज लिन आवश्यक छ, बच्चाले व्यस्त स्कूल नर्सहरूबाट अतिरिक्त खुराक लिनको लागि उनीहरूको दिनबाट समय निकाल्नु पर्दैन।
नर्सलाई दैनिक यात्राको आवश्यक पर्ने हुनाले, बच्चाहरूले साथीहरूले किन उनीहरूलाई दिनहुँ कक्षा छोड्नुपर्ला भनेर सोच्ने छैनन्।
लामो-अभिनय औषधी लिने बिरामीहरू दिनभर राम्रो मानसिक ध्यान भएको रिपोर्ट गर्नुहोस् भन्दा, छोटो-अभिनय औषधीहरूको बहु खुराकको साथ हुन सक्छ कि उच्च र नि: शुल्क अनुभव गर्नु भन्दा।
किनकि लामो-अभिनय एडीएचडी औषधिहरू दिनभर बिस्तारै काम गर्न थाल्छ, अध्ययनले संकेत गर्छ कि लामो-अभिनय औषधीमा बिरामीहरूलाई लागूपदार्थको दुर्व्यसन वा निर्भरता विकास गर्न कम सम्भावना हुन्छ छोटो अभिनय एडीएचडी औषधिमा बिरामीहरू भन्दा।
एडीएचडी औषधिले मेरो बच्चालाई कसरी असर गर्ने छ?
यदि ADHD औषधि काम गर्दैछ भने, तपाईंको बच्चाले सुधार देखाउन सक्छ कार्यमा रहनु, कक्षामा ध्यान दिनु, र साथीहरूको साथ साथी बनाउने जस्ता क्षेत्रमा। एकै साथ आक्रमक र विरोधी व्यवहार कम हुन सक्छ।
जे होस्, केहि बच्चाहरूले एडीएचडी औषधि सेवन गर्दा साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्छन्। सबै भन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू निद्रा समस्याहरू र भोक कम हुन्छन्।
कसरी छिटो फ्लू लाई प्राप्त गर्न को लागी
एडीएचडी औषधीको साइड इफेक्टको प्रबन्धन
निद्रा समस्याहरू: एडीएचडी बच्चाहरू प्रायः निदाउन समस्या हुन्छन्, चाहे उनीहरू औषधीमा छन् कि छैनन्।
केहि अवस्थाहरूमा, बच्चाहरू जसले एडीएचडी औषधि लिइरहेका छन् उनीहरू निद्रामा सजिलो भएको पाए। तर, अन्य अवस्थामा, निदाउनमा ढिलाइ हुन्छ वा कम गुणस्तरको निद्रा भनेको औषधीको साइड इफेक्ट हो किनकि प्राय: गलत डोज वा समयको कारण। कुनै निद्रा गडबडीको रूपमा, प्रारम्भिक चरण भनेको निद्रा डायरी सुरू गर्नु हो, बच्चाको सुत्ने पूर्व दिनचर्या र अन्य कारकहरू ध्यान दिएर, रणनीतिहरू पहिचान गर्नु जुन बढी आरामदायी निन्द्रामा पुर्‍याउन सक्छ। अन्ततः यद्यपि, निद्रा अवरोध जारी छ भने, एक फरक औषधि मान्न सकिन्छ।
एडीएचडी औषधीहरू सामान्यतया दिनको सुरुमा लिइन्छन्, त्यसैले यसको प्रभाव सुत्ने बेलाबाट बन्द हुन्छ।
भोक कम भयो / ढिलाइ भएको वृद्धि / पेट मुद्दाहरू: केही बच्चाहरू जसले एडीएचडी औषधि लिन्छन् उनीहरूले कम भोक वा बृद्धि विकासको साथ समस्या अनुभव गर्न सक्दछन्। यो औषधी लिने सबै बच्चाहरूलाई हुँदैन। धेरै बच्चाहरू औषधी लिनु अघि जत्तिकै बढ्दै गइरहेका हुन्छन् जबकि अरुले विकास ढिलाइ अनुभव गर्न सक्दछन्। यस कारणका लागि, नियमित रूपमा बच्चाको विकास ट्र्याक गर्नु महत्त्वपूर्ण छ एक पटक तिनीहरूले एडीएचडी औषधि सुरू गरेमा कुनै परिवर्तनहरू पहिचान गर्न।
यदि बच्चा बिस्तारै बढ्दै छ भने, पौष्टिक परिवर्तनहरूको सिफारिस गर्न सकिन्छ। कहिलेकाँही बच्चाले उचित बृद्धि मार्गमा फर्किन ड्रग (ड्रग छुट्टी पनि भनिन्छ) लिन छोड्छ। केहि अवस्थाहरूमा, प्रभावहरू गम्भीर छन् र फरक उपचारको आवश्यक हुन सक्छ।
अप्ठ्यारो पेटको सम्भावना कम गर्न भोजनको साथमा एडीएचडी औषधि सेवन गर्न सिफारिस गरिन्छ।
Tics: धेरै वर्षदेखि, चिकित्सकहरू चिन्तित थिए कि एडीएचडी औषधीहरू बढ्दो भयो वा टिक विकारहरू (अचानक, अनियन्त्रित आन्दोलन) को कारण भयो। भर्खरको अनुसन्धानले यो संकेत गर्दछ धेरै जसो एडीएचडी औषधिहरूले Tics खराब गर्दैनन् र तिनीहरूलाई सीमित गर्न मद्दत गर्दछ । विरलै अवस्थाहरूमा, एडीएचडी औषधिले टिक्सहरू अझ खराब बनाउन सक्दछ जुन अवस्थामा, वैकल्पिक उपचारहरूको बारेमा विचार गर्न सकिन्छ।
टिक विकारहरू एडीएचडीका बच्चाहरूमा सामान्य छन् र कुनै स्पष्ट कारणको लागि तीव्रतामा वृद्धि वा कम गर्न जानेको छ। त्यसैले औषधि सुरू गरेपछि टिक व्यवहारमा बृद्धि हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ एडीएचडीको लागि जिम्मेवार । एडीएचडी औषधिहरूले बच्चाको नियन्त्रणलाई टिक्कीमा बढाउनको प्रभाव र हुन सक्छ तिनीहरूलाई कम गर्दै ।
यदि उत्तेजक औषधोपचार पछि टिक्सहरू खराब हुँदै गएको देखिन्छ भने, उपचार रोक्नु अघि आफ्नो बच्चाको डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्।
मूड डिसअर्डर / आत्मघाती विचार: केही बच्चाहरूले उदासी, चिढचिढोपन, वा मुडमा अन्य परिवर्तनहरू अनुभव गर्दछ जब एडीएचडी औषधि लिन्छन्। यो धेरै औषधीहरूको साथ हुन सक्छ, शरीर तिनीहरूलाई समायोजित रूपमा। यी प्रभावहरू सामान्यतया समयको साथ फीका हुन्छन्।
आत्मघाती विचार वा निरुत्साहको भावना बढी गम्भीर कुरा हो। किशोर-किशोरीहरूले कुनै पनि समयमा आत्महत्या गर्ने विचारहरू अनुभव गर्न सक्दछन्, चाहे त्यो निदान गरिएको मेडिकल डिसअर्डर हो। एक एडीएचडी औषधि, स्ट्रैटेरा, बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरूमा आत्मघाती विचारहरूको जोखिम बढायो छोटो अवधिको अध्ययनमा। यो सम्भव छ कि अन्य एडीएचडी औषधिहरूले आत्मघाती विचारहरूको जोखिम लिन सक्छ। एक डाक्टरसँग परामर्श गर्नुहोस् यदि तपाईं वा तपाईंको बच्चालाई एडीएचडी औषधि सुरू गर्नु अघि डिप्रेसन वा आत्महत्या विचारको इतिहास छ।
तपाईंको बच्चाको भावनात्मक स्वास्थ्यको निरीक्षण गर्नुहोस् जब उनीहरूले एडीएचडीको लागि उपचार सुरू गर्छन्। यदि समस्या उत्पन्न भयो भने, खुराकमा परिवर्तनहरू तपाइँको हेरचाह टोली द्वारा विचार गर्न सकिन्छ।
बच्चाहरूको लागि प्रभावशाली एडीएचडी औषधि व्यवस्थापन
एडीएचडी उपचारको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष मध्ये एक धेरै साधारण एक हो: बच्चालाई दिनहुँ उनीहरूको औषधी लिन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने। व्यस्त काम र स्कूल तालिका बाटोमा प्राप्त गर्न सक्दछ, तर यी साधारण चरणहरूले मद्दत गर्न सक्दछन्।
एक औषधि सूची स्मार्ट कदम हो जुन तपाईंलाई व्यवस्थित राख्न मद्दत गर्दछ र कसरी तपाईंको बच्चाको लागि औषधीले काम गरिरहेको छ भन्ने बारे राम्रो प्रतिक्रिया दिन सक्छ। तपाईंको औषधि सूचीमा यी कोटीहरू समावेश गर्नुहोस्।
मिति औषधि लिन शुरू भयो
साइड इफेक्टहरू देखे
औषधी सूची फार्मेसी वा अन्य विशेषज्ञहरूको लागि तपाइँको बच्चाले हेर्न आवश्यक पर्ने यात्राहरूको लागि पनि एक राम्रो व्यावहारिक सन्दर्भ हो।
सुरक्षित भण्डारण र संगठन
एडीएचडी औषधिहरू बन्द कन्टेनरमा राख्नुहोस्। कुनै पनि औषधी जस्तो, एडीएचडी औषधीहरू खतरनाक हुन सक्छ यदि साना बच्चाहरू र घरपालुवा जनावरहरूले ठूलो मात्रामा खराबी गरे।
थप सावधानी एडीएचडी औषधिहरूको साथ आवश्यक छ किनभने ती मध्ये धेरै दुरुपयोग वा निर्भरता सम्भावनाको साथ नियन्त्रणयुक्त पदार्थहरू हुन्। एडीएचडी औषधिमा निर्भरता विकास सामान्यतया निर्धारित डोजहरूमा विरलै हुन्छ। यद्यपि नियमित आधारमा एडीएचडी औषधिहरूको ठूलो मात्रा लिँदा शारीरिक वा मनोवैज्ञानिक निर्भरता हुन सक्छ।
कुनै पनि समयमा तपाईंको घरमा औषधी छ जुन दुर्व्यबहारको सम्भावना हुन्छ, तपाईं पक्का हुन चाहानुहुन्छ कि तिनीहरू सजिलैसँग बाह्य व्यक्तिहरूको लागि उपलब्ध छैनन् जसले तिनीहरूलाई चोरी गर्न प्रयास गर्न सक्छ। लक गरिएको कन्टेनर, यस्तो ठाउँमा राखिन्छ जुन तपाईंको बच्चाहरूमा सजिलै पहुँच योग्य हुँदैन (जस्तै तपाईंको बेडरूमको कोठामा उच्च शेल्फ) तिनीहरूलाई औषधि क्याबिनेटमा राख्नु भन्दा उत्तम भण्डारण विकल्प हो।
दैनिक उपयोग अनुस्मारकहरू
केहि एडीएचडी औषधीहरू मात्र लिन्छन् जब लक्षणहरू देखा पर्दछ। तर लामो-अभिनय औषधीहरूको लागि, प्रत्येक दिन एकै समयमा उनीहरूलाई लिनु महत्त्वपूर्ण छ। औषधि रिमाइन्डर अनुप्रयोगहरू यो सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्न सक्छ कि तपाईंको बच्चालाई उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने औषधीहरू हुन्छन्, जब उनीहरूलाई आवश्यक परे।
बच्चा कसरी औषधि लिन सकिन्छ भन्ने बारे
धेरै जसो एडीएचडी औषधीहरू गोलीको रूपमा आउँदछन्, जुन केहि बच्चाहरूले अस्वीकार गर्छन् वा निगलउन संघर्ष गर्दछन्। यदि तपाईंलाई आफ्नो बच्चाको एडीएचडी औषधि लिन समस्या भइरहेको छ भने, त्यहाँ केही फरक-फरक तरिकाहरू छन् जुन तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
आकार दिँदै वा क्रमिक परिचय
आकृतिले बिस्तारै नयाँ अनुभवहरूको परिचय गराउँदछ, बिस्तारै अनुभवको तीव्रता बढाउँदै, जस्तै समय बित्दै जाँदा निगल पिल्सहरू।
स्टिमुलस फेडिंग अर्को तरीका हो जुन तपाइँको बच्चालाई बिस्तारै उनीहरूको औषधी लिन मद्दत गर्दछ। तपाईं आफ्नो बच्चालाई सानो साना गोली आकारको क्यान्डीहरू निगल गरेर शुरू गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि ठूलो र ठूलो गोलीमा प्रगति गर्दै जब सम्म उनीहरूले आफ्नो एडीएचडी गोली सुरक्षित रूपमा निल्न सक्षम हुँदैनन्।
नयाँ औषधि सेवनको प्रारम्भिक चरणहरूमा, सकारात्मक सुदृढीकरणले अनुभवलाई कामबाट अनुभवलाई रमाईलो बनाउनमा मद्दत गर्दछ। तपाइँको बच्चालाई एक विशेष उपचारको साथ पुरस्कृत गर्नुहोस् वा थप समय उनीहरूको मनपर्दो गतिविधि गरेर उनीहरूले औषधी लिने पछि।
यदि तपाईंको बच्चाले उनीहरूको अभिभावक वा हेरचाहकर्ताले यो देखेको खण्डमा गोली निल्ट्न सहज हुन्छ। प्लेसबो पिल्सहरू हातमा राख्नुहोस् ताकि तपाईं कसरी गोलीहरू निल्न सक्नुहुन्छ प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईंको बच्चालाई निस्किदिने गोलीहरू सुरक्षित छ भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ।
गोली निगलने तरिकाहरू
Pillswallowing.org , न्यूयोर्कको नर्थवेल स्वास्थ्यको सेवाले बच्चाहरूलाई गोली निल्न सहयोग पुर्‍याउने यी तीन प्रविधिहरूको सिफारिश गर्दछ।
२-गल्प विधि: बच्चाको मन पर्ने तरल पाउनुहोस्, र तिनीहरूको जीभमा गोली दिनुहोस्। तिनीहरूलाई द्रव को एक गल्प लिन र गोली निगल नगरी निल्न लगाउनुहोस्। त्यसोभए, तुरुन्तै, गोली र पानी सँगै निल्छौं।
पराग विधि: बच्चाको मनपर्दो तरल पदार्थ पाउनुहोस्, र गोलीलाई जीभमा पछाडि राख्नुहोस्। उनीहरू छिटो भन्दा चाँडो एक भुसामा तरल पिउन लगाउनुहोस्। यदि बच्चाले गोलीको बारेमा सोच्नु भन्दा उनीहरूको मनपर्दो तरल पदार्थ निगल्ने सोचमा रहेको छ भने, गोली उनीहरूको घाँटी भित्र जान्छ। [स्ट्रौ टेकनीक भिडियो]
पप बोतल विधि: बच्चाको मनपर्दो तरल पदार्थ पाउनुहोस् जुन बोतलमा आउँदछ। गोली मुखमा कहिँ राख्नुहोस्। बच्चालाई खुला पेयको बोतलमा उनीहरूको ओठ र मुख बन्द गर्न लगाउनुहोस्। उनीहरूलाई बोतलमा उनीहरूको मनपर्दो पेयको एक स्विग लिँदा उनीहरूको ओठ राख्न बताउनुहोस्। यो बच्चा लाई सजिलै तरल र गोली दुबै निगल गर्न अनुमति दिनु पर्छ। [पप बोतल विधि भिडियो]
अन्तिम उपायका रूपमा तपाई गोलीलाई लुकाउनको लागि खाना प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। बच्चाहरू जसले सामान्यतया गोलीहरू निल्न सक्दैनन् उनीहरू औषधी लिन सक्षम हुन सक्छन् जब यो एक चम्चा दही, स्याउ, वा बदाम बटरको एक चम्चासँग मिसाइन्छ। तपाईको हेरचाह टोलीसँग परामर्श नगरी कहिल्यै पिल पसाल्नु हुँदैन किनभने तपाईको बच्चाले उचित डोज पाउँदैन।
धेरै जसो एडीएचडी औषधीहरू गोलीका रूपमा आउँदछन्, तर त्यहाँ विकल्पहरू उपलब्ध छन् यदि तपाईंको बच्चाले तिनीहरूलाई लिन वा सक्दैन भने। उदाहरण को लागी, Quillivant XR एक तरल methylphenidate उत्तेजक हो। यद्यपि यी औषधिहरू सामान्यतया उनीहरूको गोलीका साथीहरू भन्दा धेरै नै खर्च हुन्छन् र केहि बीमा योजनाहरूले ढाक्न सक्दैन।
औषधि एडीएचडी साथ बच्चाहरूको लागि कुल हेरचाह योजना को एक हिस्सा हो
एक बच्चाको अभिभावक वा हेरचाहकर्ता ADHD को रूपमा, तपाईं आफ्नो बच्चाको लागि औषधि विकल्पहरूको बारेमा सिकेर सही काम गर्दै हुनुहुन्छ। सही औषधी, साधारण जीवन परिवर्तनहरू जस्तै आहार र निद्रा सुधार गर्ने, र व्यवहार उपचार जस्तै अन्य उपचारहरूसँग ठीकसँग लिइएको, तपाईंको बच्चालाई उनीहरूको एडीएचडी प्रबन्ध गर्न र उनीहरूको जीवनको समग्र गुणस्तरमा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
क्यारी एन Inaba DWTS सीजन ३० मा अनुपस्थिति को 'कुराकानी बिदा को बीच मा हुनेछ?
अमेरिकामा कति जनालाई मधुमेह छ
ativan र xanax सँगै लिन सकिन्छ
स्याउ साइडर सिरका र मह मह कम रक्तचाप गर्दछ
चिसो र छाती भीड को लागी सबै भन्दा राम्रो औषधि
टाइप २ मधुमेह को लागी राम्रो चिनी को स्तर के हो?
कहिले सम्म vyvanse 20 mg अन्तिम हुन्छ
तपाइँ तपाइँको रगत को प्रकार कसरी निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ?